Natiijooyinka Kulamadii Caawa Laga Ciyaaray Spain, Talyaaniga Iyo Faransiiska | Laacib.net
Natiijooyinka Kulamadii Caawa Laga Ciyaaray Spain, Talyaaniga Iyo Faransiiska
February 13, 2020 Balaleti Comments Off on Natiijooyinka Kulamadii Caawa Laga Ciyaaray Spain, Talyaaniga Iyo Faransiiska
Dalka Faransiiska waxaa caawa la ciyaaray kulamo ka tirsan wareega sideed dhamaadka ee French Cup iyadoo Paris Saint-Germain ay iska xaadirisay semi-finalka ka dib markii ay 6-1 ku xasuuqeen kooxda Dijon oo marti loo ahaa.
PSG ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 1aad ka dib gool uu iska dhaliyay Wesley Lautoa laakiin 12 daqiiqo ka dib Dijon ayaa ciyaarta ku soo laabatay markii uu goolka barbaraha u dhaliyay Mounir Chouiar.
Laakiin wixii ka danbeeyay waxaa mashxaradeysay PSG iyadoo Kylian Mbappe uu 2-1 ka dhigay, Thiago Silva ayaa 3-1 ka dhigay ka hor inta uusan Pablo Sarabia labo gool dhalinin iyadoo Senou Coulibaly uu gool kale iska dhaliyay.
Waxaa PSG semi-finalka French Cup kula biirtay kooxda Lyon oo iyagana caawa 1-0 ku qaarjiyay kooxda Marseille kulan adag oo dhexmaray labada kooxood.
Goolka guusha waxaa dhamaadkii ciyaarta u dhaliyay Lyon Houssem Aouar.
Kooxda Rennes oo xalay 3-0 kaga soo badisay ASM Belfort ayaa iyadana iska xaadirsay semi-finlka halka habeen danbe oo Khamiis ah ay ciyaari doonaan kooxda Epinal iyo Saint-Etienne.
Athletic Bilbao ayaa talaabo u qaaday inay u soo baxdo finalka Copa del Rey ka dib markii ay lugtii hore ee semi-finalka 1-0 kaga badiyeen kooxda Granada oo marti ku aheyd garoonka San Mames.
Bilbao oo xilli ciyaareedkan ku hamineysa inay qaado koobka boqorka Spain islamarkaana soo reebtay Barcelona ayaa goolka ay guusha ku gaartay waxaa u saxiixay Iker Muniain.
Kulanka kale ee semi-finalka lugtii hore waxa uu dhici doonaa habeen danbe oo Khamiis ah markaasoo ay wada ciyaarayaan Real Sociedad oo soo reebtay Real Madrid iyo kooxda heerka labaad ee Mirandes.
Lugta labaad ee semi-finalka waxaa la ciyaari doonaa 4ta iyo shanta bisha Maarso.
Napoli ayaa faa’ido weyn u heshay inay u soo baxdo finalka Coppa Italia ka dib markii ay lugtii hore ee semi-finalka ay 1-0 kaga badisay Inter Milan ciyaar ka dhacday garoonka San Siro.
Goolka qura ee ay ku badisay Napoli waxaa u saxiixay Fabian Ruiz daqiiqadii 57aad iyadoo lugta labaad ee semi-finalka ay labada kooxood dheeli doonaan 5ta bisha Maarso.
Habeen danbe oo Khamiis ah kooxaha Milan iyo Juventus ayaa iyagana ku ciyaari doona San Siro lugta hore ee semi-finalka Coppa Italia iyadoo lugtooda labaad la dheeli doono 4ta bisha Maarso.